एनआईसी एशिया बैंकको नाफामा सामान्य सुधार | Artha News Nepal
Home	बैंकिङ	एनआईसी एशिया बैंकको नाफामा सामान्य सुधार
एनआईसी एशिया बैंकको नाफामा सामान्य सुधार
काठमाडौं – एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको नाफामा सामान्य सुधार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले रु. २ अर्ब ६ करोड ५ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रु. ४ करोड ४३ लाख अर्थात २.१९ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले रु. २ अर्ब १ करोड ६२ लाख खुद नाफा कमाएको थियो । सो अवधिसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा रु. ७२ करोड ८१ लाख रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रु. २९ करोड ९३ लाख बढेर रु. ३ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको फि तथा कमिशन आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएपछि खुद ब्याज आम्दानीको तुलनामा सञ्चालन मुनाफा बढ्न नसकेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा रु. १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ फि तथा कमिशन आम्दानी गरेको यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा रु. ९३ करोड ५६ लाख मात्र यस्तो आम्दानी गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा रु. ११ अर्ब ५६ करोड ४० लाख चुक्तापूँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा रु. ६ अर्ब ८९ करोड २८ लाख रहेको छ भने रिटेन्ड अर्निङ्गमा रु. ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । खुद नाफा सामान्य बढेपनि बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी भने घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा रु.४१.६१ रहेको बैंकको यस्तो आम्दानी, चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा घटेर रु. ३५.७३ कायम भएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकनाफा